1 TESALỌNAIKA 2 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1TE 2)
1 TESALỌNAIKA 2
Unu onwe unu maara, ụmụnna anyị, na ọbịbịa anyị bịakwutere unu bara uru.
Ọ dịghị mgbe ọ bụla, dị ka unu maara, anyị ji ire ụtọ chọọ ime ka unu bụrụ ndị nke Kraịst. Chineke makwaara na anyị ejighị aghụghọ bịakwute unu ịrịọ ka unu bụrụ ndị enyi anyị nꞌihi na anyị chọrọ ịnata unu ego nꞌaka.
Ma ọ dịghị mgbe anyị rịọrọ unu ma ọ bụ ndị ọzọ, ka unu too anyị. Nꞌezie, dị ka ndị ozi Kraịst ọ bụ ihe ruru anyị ịsị unu kwanyere anyị ugwu.
Kama anyị biri nꞌetiti unu dị ka ndị bụ nna na-azụ ụmụntakịrị ha, na-elekọta ha.
Nꞌihi na anyị hụrụ unu nꞌanya nke ukwuu ruo na ọ bụghị nanị na anyị kwusaara unu ozi ọma, kama anyị nyekwara unu onwe anyị.
Nꞌezie, ụmụnna m amaara m na unu ga-echeta otu anyị si rụọ ọrụ nꞌetiti unu. Anyị na-arụ ọrụ ehihie na abalị ịhụ na anyị rụtara ego ga-ezuru anyị, nꞌihi na anyị achọghị ịbụ oke ibu nye onye ọ bụla mgbe anyị na-ezisara unu ozi ọma nke Chineke.
Unu onwe unu bụkwa ndị akaebe dị ka Chineke si bụrụ onye akaebe, na mmekọrịta anyị na unu, bụ mmekọrịta dị ọcha na nke guzoziri eguzozi, na nke ịta ụta ọ bụla na-adịghị.
Ọ bụrụ na unu ga-echeta, anyị mesoro unu mmeso dị ka nna si na-emeso ụmụ ya. Mgbe nile, anyị nọ na-arịọ unu, na-agba unu ume, ma na-akwagidekwa unu.
Na o kwesịrị ka unu na-ebi ndụ kwesịrị ụmụ Chineke, nke ga-ewetara Chineke onye kpọbatara unu nꞌime alaeze ya ọṅụ, ka unu soro ya keta oke nꞌebube ya.
Nꞌihi nke a, anyị ga-aga nꞌihu na-ekele Chineke ekele nꞌihi na mgbe anyị bịakwutere unu, unu anabataghị ozizi anyị dị ka ozizi nke aka anyị, kama unu nabatara ya dị ka ozizi si nꞌebe Chineke nọ bịa. Otu a ka ọ dịkwa. Okwu ahụ bụ okwu Chineke. Ọ gbanweela ndụ unu, mgbe unu kweere ya.
Mgbe unu kweere okwu ahụ, ụmụnna m, unu onwe unu ketara oke nꞌụdị ahụhụ nke ndị Kraịst nọ na Judia hụrụ mgbe ndị obodo unu bidoro ịkpagbu unu, dị ka ndị Juu si kpagbuo ndị Kraịst na Judia.
Nꞌihi na mgbe ndị Juu gbusịrị ndị amụma Chineke ziteere ha, ha gbukwara Onyenwe anyị Jisọs. Ugbu a ha na-akpagbukwa anyị na-achụpụ anyị. Ha na-emegide Chineke na mmadụ.
Ha na-agbalị igbochi anyị izisara ndị mba ọzọ ozi ọma ka ha ghara ichegharị. Ha na-esite nꞌụzọ dị otu a na-eme ka iko mmehie ha na-eju. Ma ikpe Chineke adakwasịla ha rị ịla ha nꞌiyi.
Otu ọ dị, ụmụnna anyị, mgbe anyị si nꞌetiti unu pụọ nọọ nwa oge nta, ọ bụ ezie na anyị na unu nọkwa nꞌime mmụọ,
anyị gbalịsịrị ike ịbịakwute unu, karịsịa, mụ onwe m bụ Pọl gbalịrị, gbalịa ịbịa, ma ekwensu gbochiri anyị.
Nꞌihi na olee ihe bụ olileanya anyị, ma ọ bụ okpu eze anyị, nke anyị ga-eji nyaa isi? Ọ bụ unu onwe unu. Ee, unu onwe unu ga-abụ ọṅụ anyị mgbe a ga-eme ka anyị nile guzo nꞌihu Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, mgbe ọ ga-esi nꞌeluigwe bịa ọzọ.
Nꞌezie, unu onwe unu bụ ọṅụ na otuto anyị.
1 TESALỌNAIKA 2:1
1 TESALỌNAIKA 2:5
1 TESALỌNAIKA 2:6
1 TESALỌNAIKA 2:7
1 TESALỌNAIKA 2:8
1 TESALỌNAIKA 2:9
1 TESALỌNAIKA 2:10
1 TESALỌNAIKA 2:11
1 TESALỌNAIKA 2:12
1 TESALỌNAIKA 2:13
1 TESALỌNAIKA 2:14
1 TESALỌNAIKA 2:15
1 TESALỌNAIKA 2:16
1 TESALỌNAIKA 2:17
1 TESALỌNAIKA 2:18
1 TESALỌNAIKA 2:19
1 TESALỌNAIKA 2:20